ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
Posted by ムラカミ on Jun 3, 2013 in Poetry, Short Story | 35 comments
ရီးဘဲ ကွာ …
မင့်ကို ကျော်ကိုကို့ ဇဂါး
ကိုငှက်ကို ပြန်မပေးနဲ့ …
ကိုတိုးဂျီး ပြန်မပေးနဲ့ …
ဦးခင်ဝမ်း ပြန်မပေးနဲ့ …
ဟိုဂဒုံး စကား အရဆို .. သူရို့
ကောင်းကင်ဘုံမှာ ၀ိုင်းခြင်း ခတ်နေတာတဲ့…
အခု နောက် တျောက် …
သူလည်း ခြင်းခတ်ချင်မပေါ့… ရီးဖစ်လား..
နဲဗား ဆောရီး ကို နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာ …
မင်းမသိ တာ ညံ့လွန်းသေးတယ်
မင့် ၆၃မကျလို့ …
အိမ်အိမ်း – ဖွာထောင်း နဲ့ နစ်ကီ
ငဒို့ သီးခံ ကြည့်ပေးနေတယ်ကွ…
ဘာမှ မပြောဘု ..
ရီးးးး ဘဲ ကွာ…။
ကြက်အူလှည့် ပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ။
သေမင်းဆိုတဲ့ လူရီး အဲ လူဂျီး…!
ခေါ်ဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ လူတွေလည်း တပြွတ် အဲ တစ်ပုံကြီး ရှိသေးတယ်။
အဲ စကားမစပ်။ ဟိတ် လူဂျီး။
ခေါ်ချင်းခေါ်လည်း သူ့ ကို အရင် ခေါ်ပါ။
သူ အရင် ဆဲ တာပါ။
သွားလေသူ ဆြာမင်းသိင်္ခ စာတွေထဲမတော့ သေမင်းနှုတ်ခမ်းမွေးကို တပင်ချင်းနှုတ်ပြီး ကြည်ဆယ်ဝံ့သူတို့
သေတယ်ဆိုတာ ခေတ္တ ခန အိပ်စက်တယ်ပဲ မှတ်တယ် ပြောတာတို့ .. ဖတ်ဖူးတာပဲလေ..။
နောက်ထပ် သွားလေသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဆြာချော ကတော့ ကြွေတယ် ဆိုတာကို က ပွင့်ခြင်း ပဲ တဲ့…
သည်တော့ သေတယ်ဆိုတာ ကိုက မွေးခြင်း တမျိုး ပဲလို့ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မလား မပြောတတ်…။
နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့ နောက်ထပ်သွားလေသူကြီး တယောက်ကတော့ ‘Oh wow. Oh wow. Oh wow’ တဲ့ ….
ကျုပ်တော့ ဂနေ့ သေတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောတာ များမယ်ထင့်…။
yee bal so dar ga bar go pyaw dar done .
ညလေး မှောင် မဲ .. တိမ်ညိုတွေကြား အလင်းပျောက်ကွယ်…
အို.. ဒီလိုညမျိုး အိပ်လို့ပျော်အောင် ..လာပြီး .
ဘယ်သူကများ နှစ်သိမ့်မလဲ ..မင်းကို ငါတကယ် မမေ့သေးဘူး
ဒါလေး သွားတွေ့ပြီး စိတ်မကောင်း အတော် ဖြစ်သွားတယ်..
တခါတရံ အချစ်ဆိုတာ သေတတ်သည်။
တေးရေး – မောင်မောင်ဇော်လတ် တေးဆို – လေးဖြူ
ဖြစ်မယ် ပျက်မယ် သေခြင်းတရား
တစ်နေ့ကျ အိုမုချ လို့ ကြုံမှာ သိတယ်…သိလည်းပဲ…
အကုန်ခွဲခွာ အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာ သိတယ်…သိလည်းပဲ…
ငါ့ရှေ့မှာ မနေ့တစ်နေ့က ရှိကြသေးတယ်…
အတူတူ ရွက်လွှင့်နေတုန်းမှာ ပျောက်ကွယ်…
အယ်လ်ဖြူနဲ့ ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ
ဒေါက်တာ မောင်မောင်ဇော်လတ် ဆိုတဲ့ သီချင်းရေးဆရာက
သူ့ရင်ထဲထိခိုက်ခံစားရတာကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးပြီး ပေါက်ကွဲပါတယ်…။
ခံစားချက်တူတဲ့ လေးဖြူက ဒီသီချင်းကို ဆိုပါတယ်…။
ကိုယ်လည်း ကေအေတီကြီးကို ၀င်လွမ်းခွင့်ပြုပါ…။
မြန်မာ စတီရီယို လောကမှာ…
မင်းလေးမင်း (သုခမိန်လှိုင်၊ မောင်သစ်မင်း၊ ၀င်းမင်းထွေး၊ မင်းချစ်သူ)
အဲဒီ ကေအေတီကြီးကို ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးပါ…။
အူးလေး.. သူရို့ စိတ်ကောက်နေကြတယ် ကြားတယ်…
ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာ ဒီတေးလ်တော့ သများလည်း မသိသေးဘူး
သူခံစားထိရှ ရတဲ့အထဲမယ် အဲ့ဒါတွေလည်း ပါမယ်ပေါ့ဗျာ..
၀ဋ်ကြွေးတွေကို ဆပ်လို့မကုန်သေးတဲ့ ကိုကေအေတီရဲ့.. ၀ဋ်ကြွေးဆိုတဲ့ အသံလေးကို အခုထိ ကြားနေတုန်းပါပဲ…
အိုက်ဒိ အငိုချံပျံ လဗြိုလ်ကြီးတော့ ဒီတခါမှ တကယ်ငို ရပြီဗျာ…
မြင်ယောင်မိတယ် အတိတ်မြက်ခင်းစိမ်းလေး.. မြင်ယောင်နေဆဲ .. ကြာဘီ ဆိုပေမယ့် ..
သများ လဗြိုလ်ဂျီးနိုရင် သများလည်း နိုချင်ဒယ်…
ဘယ်သူဆိုတဲ့ ဘာသီချင်း ဆိုတာလေးများ ပြောရင် ပိုမှတ်မိ သွားမယ်။
“Rest in peace” ပါ ကေအေတီ။
အဲ့ဒီအူးလေး ကျော်အောင်သစ် ကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ပေါ့ဗျာ
(ဆက်ဆွဲထုတ်ရင် တပြွတ်ကြီး ထွက်လာဦးမယ်)
လူတွေ ပျားပန်းခတ် အသက်ဝင်နေပေမယ့်
သူ့ကိုယ်ပိုင် အသက်ရှင်ချိန်က ရှားတယ်
တိမ်မျှင် တခုလို ခပ်ပါးပါးခပ်နွဲ့ နွဲ့
နာကျင်အချိန်တွေက ပိုများတယ်။ ။ ။
ကေအေတီ သီချင်းလေး အကြောင်း ပြန်ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
မိုးရာသီနဲ့ မိုးကိုဖွဲ့တဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ အခုလောလောဆယ်
ကျွန်တော် နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေးကတော့
ကေအေတီနဲ့ အာရ်ခိုင် တို့ရေးပြီး မဒီ သီဆိုထားခဲ့တဲ့ ရွာသာရွာပါမိုး သီချင်းလေးပါ။
CHORUS အပိုဒ်အရောက်မှာ ရွာသာရွာပါမိုး
ဒီးတာဒီး ဒီးတာဒီး ဒီးတာဒီးတာဒီးတာဒီးတာ ဒီးတာတီး
ဆိုတာလေးက နားထောင်သူရဲ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမှာပါ…။
စာသားလေးတွေ နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး…။
တေးရေး – ကေအေတီ+Rခိုင် တေးဆို – မဒီ
ကြည့်စမ်းပါ ၀န်းကျင် တစ်လောကလုံး
ရွာတော့ မိုး ရာ…
ဒီလမ်းနဲ့ မိုးကို မှန်းမျှော်မိ
နွေလွန်သွားတဲ့ အချိန်ရောက်တိုင်း သတိရနေ..
တီးဒါတီး တီးဒါတီးဒါတီးဒါတီးဒါတီးဒါတီး တားတီ။
ကလေးလို ဒို့မှာ လမ်းပေါ်ပြေးချင်လို့ မိုးရွာပါ။
အဆိုးတွေ အဆိုးတွေ အဆိုးတွေ အားလုံး
ရှိသေးရင်ဘေးဖယ် မိုးရေထဲ ပြန်ညှိမ်းသတ်ချင်တယ်
တီးဒါတီး တီးဒါတီးဒါတီးဒါတီးဒါတီးဒါတီး ဒါတီ။
သိတ်မကြာသေးခင်က ဂျာနယ်တစ်စောင်ထဲမှာ ဒီသီချင်းအကြောင်း ပြောခဲ့ကြဘူးပါတယ်။
ဂျာနယ်နာမည် မေ့နေလို့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ…။
ဂျာနယ်ထဲပါခဲ့တဲ့ မဒီ ရဲ့ ရွာသာရွာပါမိုး သီချင်းလေးအကြောင်း ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
ဒီသီချင်းကို ကနဦးပေါက်ဖွားစေခဲ့သူ တေးရေးကေအေတီရဲ့ စကားတွေကတော့ ..
မူရင်းသီချင်းထွက်လာတာ နားထောင်ပြီးကြိုက်လို့ ရေးမယ်ဆိုပြီး ၀ိုင်းဒိုင်းကြဲ လုပ်ဖြစ်တဲ့သီချင်းပါ။
နောက်ပြီး ဒီသီချင်းကကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရေးတာ မဟုတ်ဘူး။
R ခိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးရေးတဲ့သီချင်း လေ”
လို့ဒီသီချင်းရဲ့ထူးခြားမှုလေး အကြောင်းကို ယခုလိုဆိုပါတယ်။
တေးရေးဆရာနှစ်ဦး ပေါင်း စည်းရေးဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်း
“ ဒီသီချင်း ကိုကြိုက်နေတော့ ထပ်ထည့်ချင်တာနဲ့ အသံသွင်းဖို့ စတူဒီယိုသွားခါနီးမှာ
R ခိုင်ကို ကော်ပီလေးပြပြီး
When The Story Go ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ရွာသာရွာပါမိုးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး
မိုးအကြောင်း အပျော်လေးရေးထားဖို့ ပြောလိုက်ပြီး
Rခိုင်ရေးထားတာတွေမှာ တချို့နေရာလေးလိုက် ပြင်ချောလိုက်တာပေါ့။
ဒါကြောင့် ဒီသီချင်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ပူးပေါင်းရေးတဲ့ သီချင်းလေးပါ”
အခုတော့ ဦးကြီးဘလက်ပြောဒဲ့ ကေအေတီကြီးကို တေမင်းကခေါ်တွားဘီတော့။ တနားဘာဒယ်။ ၄၈ ပဲရှိရှာသေးတယ်။
ကျနော် ရှဲထားတဲ့ လင့်ခ်သာ သွားဖတ်ကျိပါတော့ ဘဘဘလက်ရယ်.
ဆို – လေးဖြူ
တေးရေး – ကေအေတီ
ဒီလို သီချင်းတစ်ပုဒ် အထီးကျန်သွား . . .
ဘယ်လို ကြိုးစား မမေ့တော့ဘူး
အသဲများကွဲသွား အလူးအလှိမ့်နဲ့ ခံစား
နေ့နဲ့ည ဖြစ်ပျက်သမျှဟာ အသက်မဲ့ဘဝလေး
ဒီမှာကြည့်လိုက်အုံး . . .
Source – soemoeaung.blogspot.co.uk/2007/07/blog-post_15.html
ကော်ပီအုံးကျုံးဆြာတွေ ငြင်းဂျအူးလေ. သူကတော့ထားသွားပြီ.
ကျုပ် တော့ ဂီတာကဖီး နားထောင်ဖြစ်တိုင်း သတိရရမယ့် မျက်နှာသစ်တခုတိုးပေါ့
In my Point of view of his gr8est hit. !
Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဆရာကေအေတီရေးပေးတဲ့ ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်သီချင်း မချစ်နဲ့တော့ နဲ့ လူသိလာခဲ့တဲ့ ကိုကိုမောင် လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က လှိုင်သာယာမှာ ဆိုင်ကယ်အက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဆုံးတယ်.. ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆရာကေအေတီသီချင်း ၀တ်ကြွေးဆိုတာဝိုင်ဝိုင်းထက်ကောင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်.. အသံအရမ်းကောင်းတဲ့ရှားရှားပါးပါးအမျိုးသားအဆိုတော်.. နှမျောလိုက်တာ..
အခုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်.. ဆရာရေးတဲ့သီချင်းတွေ အများစုက ကော်ပီတွေဖြစ်ပေမယ့် သူရေးတဲ့ သီချင်းတိုင်းရဲ့စာသားလေးတွေကိုအရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တာ.. သွားပြန်ပြီ.. အရမ်းနှမျောတယ်.. သူတို့ အရွယ်တန်းထဲမှာ သဘောကျမိတာ.. သူရယ်.. ဆရာမြင့်မိုးအောင်ရယ်.. ကိုကြီးငဲရယ်ပေါ့..
လူတိုင်းမလွဲမသေသွားရမယ့်လမ်းဆိုပေမယ့် သူလိုလူမျိုးကိုတော့နှမျောမိတယ်.. သူ့ အတွက်ကတော့အရမ်းငြိမ်းချမ်းသွားတာပါ.. R.I.P
ကွမ်းသီးရင်းကနေ အသက်ပါသွားတာတဲ့ ..
အော် ..နှလုံး သမားများ မြန်ချက်..
တခါသေမလိုဖြစ်ပြီး ပြန်ကောင်းကာစက အင်တာဗျုးတွေ
အချစ်ဆိုတာ တခါတလေ အသက် ကိုရန်ရှာတတ်တယ်ဗျ…။
စကားအတင်းစပ် မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်ကြီး လည်ချောင်းကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်တဲ့ …
(ကျန်တာတော့ ရှာဖတ်ပါကုန် … ကွိကွိ..)
ဒီဆရာ မဒီကို “မ” သွားတုန်းက တင်းနေတာ…
အခုလို လူ့ဘဝကို စောစောစီးစီး စွန့်သွားတော့…
မိန်းမ ဗျ မိန်းမ ..
Main တွေချည်း မ သွားလို့ မိန်းမ လို့ ခေါ်တာနေမှာ…နှလုံးရောဂါပါ အဆစ်ပေးသွားသေး..
သုံးဆယ်တန်းမှာ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် ဟိုအန်တီကြီး
လေးဆယ်တန်းမှာ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် ဟိုအကယ်ဒမီ အန်တီလေး
နဲ့ဆုံခဲ့လို့ ဖိုးကံကောင်းမှတ်ခဲ့တာ …အော်..ခမျာ ဟိုက main တွေချည်း မ-မသွားကြတာကိုးဗျာ…
Main တွေချည်း မ သွားလို့ မိန်းမ လို့ ခေါ်တာနေမှာ
ဝါးလုံးရှည် နဲ့ ရမ်းရိုက်နေပါရောလား။
ပြန်ရိုက်လိုက်ရင် ထပ်ပြီး ငိုမဆုံး ဖြစ်ရပေဦးမယ်။
၀ုတ်ဘာဒယ် ၀ုတ်ဘာဒယ် ယောက်ျား ဒွေသာ မကောင်းဒါဘာ ..
မကောင်းမှန်းသိလို့ ကျော် ဆို အဲ့ဘဲတွေ တကောင်မှ ယူမှာမှုတ်ဖူး
မိန်းမပဲ ယူမှာ ။
တပုဒ်မှကို.. မဆိုဘူး.. သူ့သီချင်းပြောတာ.. :harr:
ဘယ်ပွဲမှာတုန်း ဘယ်တုန်းကတုန်း ဘာမှ ရိုက်နှက်မလာဘူးလား.
ရင်ခွင်ပျောက်သူ သွားတွေ့မိတယ်. အော်. ကိုငှက်နဲ့ ဆိုထားတာ.
တကယ့် ပဂေး ၃ ယောက် ဆုံဆည်းမှုပါပဲဗျာ.
ကေအေတီ ရဲ့ လူသိနည်းသေးတဲ့
ဂီတလောက အစပိုင်းလေး နည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ်…။
ကေအေတီဟာ လေးဖြူရဲ့ ကန္တာရလမင်း စီးရီး မတိုင်မီကတည်းက
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းလေးတွေကို ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့…။
သျှိုင်းအောင် ရဲ့ သဇင်မင်း စီးရီးမှာ ကျော်အောင်သစ် နာမည်နဲ့
လူသိတော်တော် နည်းမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်…။
ကေအေတီ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို လေးဖြူက ရွေးပေးခဲ့တာပါတဲ့…။
လေးဖြူက ကျော်အောင်သစ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကဗျာရေးဖို့အတွက်ထားလိုက်ပြီး
ကေအေတီ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေးပါလားလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့…။
ဒါနဲ့ ကေအေတီဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခု ရှိမှ ကောင်းမယ်ဆိုပြီး
ကေအေတီ ဆိုတာ ဂျာမန် ဘာသာ စကား မှာ ကြောင် ကိုပြောတာ…၊
ကြောင်မှ ကြောင်စုန်း၊ သင်းကွဲကြောင်၊ အဲဒီ အဓိပ္ပာယ်ကို ကြိုက်တာနဲ့
ကေအေတီ လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာလို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်ဗျာ…။
ကိုရင် ကြက်အူလှည့်ရေ… ကိုမျိုးဆွေသန်းဖွဘုတ်ကမလာတာခင်ဗျ
သူငယ်ချင်းကျော်အောင်( ကေအေတီ)ကို သူချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေများလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ မိသားစုဝင်များက ဒီနေ့ ညနေမှာ မီးသဂြိုင်္လ်ပြီး အရိုးအိုးကို ဂူသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အရိုးအိုးကို ကျော်အောင့် ညီမနဲ့ညီကိုပေးပြီးဂူသွင်းစေပါတယ်။ ကျွန်တော်၊ကိုလေးဖြူ၊ အယ်နောင်း၊ ဟန်ထွန်း၊ ကိုလင်းလင်း၊ဦးလီ၊ သားငယ်၊ စိုးနိုင်၊ Mသီဟ၊ Rခိုင်၊ ကိုမိချောတို့ ကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ အပြန်မှာကျွန်တော်နဲ့ ကိုလေးဖြူနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲပြန်လာပါတယ်၊ အပြန်လမ်းမှာ ပြောဖြစ်တာက အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့ သူ့ သေခြင်းကိုအားကျကြပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထင်တာက သူ့အိမ်နဲ့လမ်းထိပ်က ကန်တော်လေးဆေးရုံကြားမှာ နှလုံးခုန်ရပ်လေပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်။
သူက အာနာပါနလည်း ရှုလေတော့ ကိုလေးဖြူက သူဆေးရုံကိုလည်း SSC ကိုမောင်းလို့ ပြောနိုင်ပြီး အသက်ရှု ကျပ်သော်လည်း ငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးပါလာတယ်ဆိုတော့ တည်ငြိမ်စွာပဲ နှလုံးခုန်ရပ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒို့ လည်းပြင်ကြစို့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်၊လောကကြီးကို အကောင်းမြင်၊ ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တော့ တတ်နိုင်သလောက်လှပမယ့်အနုပညာပစ္စည်းလေးတွေဖန်တီး၊ ကံ၊စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ မျှတအောင်နေ၊သတိလက်မလွတ်စေနဲလို့နှစ်ယောက်သားပြောပြီး သားငယ်၊ စိုးနိုင် တို့ နဲ့ ကော်ဖီသောက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းကိုပြည့်ကလှမ်းဖုန်းဆက် တာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုလေးဖြူနဲ့ကိုပြည့်အိမ်မှာ ကျော်အောင့်အကြောင်းလေးတွေပြောပါတယ် ကန္တာရလမင်းကတည်းက လူတွေထဲက သွားနှင့်သူ ကေအေတီ(ကျော်အောင်)ကို ကျန်ခဲ့သူ
ကျွန်တော်နဲ့ကိုလေးဖြူ ကနှုတ်ဆက်တဲအနေနဲ့ သူ့သီချင်းလေးတစ်ပိုဒ်အော်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်၊ ကိုလေးဖြူရဲ့နောက်ထွက်မယ့်ခွေအတွက် ကေအေတီက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပြီးအောင်ရေးပေးသွားနိင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်နဲ့ ကိုလေးဖြူဂစ်တာတီးပြီးအော်တာ အဲဒီသီချင်းရဲ့ တစ်ပိုဒ်ပါ။ ကေအေတီရဲ့ စာသားက
ငါတစ်ယောက်ထဲ ခက်တဲ့ဘဝဟာ ဆက်ပြီးအသက်ရှင်စရာ – -ရေးဟေး
ကျွန်တော်တို့ က အော်— မင်းကစီစဉ်ပြီး သွားတာပေါ့လို့ တောင်ပြောမိပါတယ်။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဖြောင့်ပါတယ်သတိတရားရှိရှိနဲသွားတာလို့ သူ့တွက်ကျေနပ်ရပြီး သူနေထိုင်ခဲ့ချိန်မှာလည်း ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်
တတ်နိုင်သလောက်လှပတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပဲြ­ဖည့်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ကေအေတီ ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကျော်အောင်သစ်အတွက် ကျေနပ်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကေအေတီ ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး သတင်းကို ဒီမှာနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
(နှလုံးရောဂါ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်အတက်မှာနှလုံးခုန်ရပ်တန့် သွားတဲ့ တေးရေးကေအေတီကို ကွမ်းယာသီးလို့ သေတယ်လို့ပြောကြတော့ အနုပညာရှင်များသေရင်ဆန်းဆန်း သေမှကြိုက်ကြတဲ့ကမ္ဘာလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် စကားလုံးလှလှလေးတွေရေးပြီးချန်ထားခဲ့တဲ့ ကေအေတီ ကတော့ သူ့ သေခြင်းကို အဲဒီနာမည်တတ်တာမမျှတဘူး လို့ ပြောမှာအသေအချာပါ။)
(သူ့ ကိုချစ်ခင်ကြလို့ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်း မိသားစုကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းဆိုပါရစေ)။ ။
တယောက်ဖွတာ သွားဖတ်မိလို့ ဘာဖစ်ကြပြန်ပလဲ ဆိုသိတ်ပူသွားတာ. ဟိုးတုန်းက ဟာတေပါ
အူးလေးတို့ဆီမှာမလား ဟိုအငိုချံပျံလေးက. သူ့မတွေ့မိလို့
အဲဒီရှောင်တခင်မှာ သူကတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ပါသွားဘီ….
◄ တနင်္လာအစ သောကြာအဆုံး ►
ဒီ ဒီဇိုင်း၊ ဒီစတိုင်လ်ကို မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေပြန်လှန်တွေ့ရတော့မှ
ခင်ဗျားနာမည်ဟာ တင်္နလာအစ၊တနင်္ဂနွေအဆုံး ကျွန်တော်သိတယ်။
ဒါပေမယ့် .. ဒီကဗျာခေါင်းစဉ်ပဲလို့ပြောမယ်။
တစ်ပတ်မှာ ၇ ရက်လုံးခင်ဗျားဆုံးနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ
တစ်ပတ်မှာ ၅ ရက်ပဲ ဒီကဗျာခေါင်းစဉ်အတိုင်း ခင်ဗျားဆုံးရှုံးရမယ်။
ကမ္ဘာပေါ်က နုတ်စ်၁၂လုံးကလည်း ခင်ဗျားကိုလုမှာပဲ
ကမ္ဘာပေါ်က တူရိယာတိုင်းကလည်း ခင်ဗျားကိုလုမှာပဲ
ကမ္ဘာပေါ်က မာကျောနုရွစကားလုံးတိုင်းကလည်း ခင်ဗျားကိုလုမှာပဲ
ခုတော့ Dm ကော့ဒ်ကြီးကို ဂျလွမ်ခနဲချလိုက်ရင်တောင်
G ကော့ဒ်ကြီးကို ဂျလွမ်ခနဲချလိုက်ရင်တောင်
ဒီကဗျာခေါင်းစဉ်ဟာ ၂၀၁၃၊ ဇွန်(၁)၊ စနေမှာဆုံးတယ်
မနေ့တစ်နေ့ကပဲ ခင်ဗျား comment တွေ
ကျွန်တော်တို့ like နှိပ်နေသေးတယ်
ဒါကြောင့် ဒီကဗျာဟာဒီမှာဆုံးတယ်လို့ မရေးချင်ဘူး။
အဓိပ္ပါယ်မရှိပေမယ့် .. ၀လုံးရေးသလိုပေါ့
အဆုံးဟာ အစကို နင်းပြီး
မနေ့ညက မယ်လိုဒီဝါးလ် ကိုကိုမောင် အမှတ်တရ ဆိုပီး လုပ်တဲ့ မူဗီလေးကျိဖြစ်တယ်
စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ …ဟိုဘဲယီး ငိုတာ ..ငိုတာ …
ရက်ပိုင်းအတွင်းသူလည်း လိုက်ရမယ်ဆိုတာ မသိလေတော့…